အမှန်တရားထက်သာလွန်သောဘာသာတရားမရှိပါ - AFRIKHEPRI
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 9, 2020
Lသူလျှို့ဝှက်သောအယူဝါဒမှာ "Hermetic Doctrine", "Esoteric Doctrine" နှင့်သူတို့၏ဝေါဟာရသဘောအရ "Occult Sciences" နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အတွင်းလူသားမြားသညျအပါအဝငျ - ဤထားသောစာပိုဒ်တိုများတို့သည်စကြဝဠာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်အစားအားလုံးသတ္တဝါ၏အမှုမှာအပေါငျးတို့သ esoteric သှနျသငျဖို့ရှေးအတွက်စွပ်စွဲခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားသွန်သင်ချက်တွေကိုကမ္ဘာပေါ်မှာရေပန်းစားအတွေးအခေါ်နှင့်သိပ္ပံနည်းကျအတွေးများ၏အမျိုးမျိုးသောကျောင်းများ၏ယာယီလက်ရှိကနေခွဲခြားဖို့အမည် "Esoteric အယူဝါဒ", "Hermetic အယူဝါဒ" သို့မဟုတ် "လျှို့ဝှက်ချက်အယူဝါဒ" အောက်မှာထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းပူးတွဲမဟုတ်ပါ - သို့မဟုတ်ပူးတွဲပါဘူး - ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာအယူဝါဒယောက်ျားများ၏သမိုင်းအဖြစ် variable ကိုအဖြစ်၎င်း၏ပုံစံနှင့်၎င်း၏ထုတ်ဖော်ဖြစ်စဉ်များအတွက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာထာဝရဥပဒေသွန်သင်အဖြစ်က၎င်း၏တန်ရာမှဖြစ်သကဲ့သို့, ဠာ၏ရေရှည်တည်တံ့ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်ခေါ်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ "ဟုမိုဃ်းမိုဃ်းကောင်းကင်၏အယူဝါဒ။ "
ဒီအဆုံးမဩဝါဒပေး Atlantis ထံမှလူမျိုးအပေါင်းတို့မှဘုံကြီးသူဂရိနိုင်ငံအားလုံးကိုအရှေ့, ခါလဒဲ, အီဂျစ်အဲဂုတ္တုပြည်ကျော်ချောင်းပါရှိရာအိန္ဒိယသို့သှားကွ၏။ သူမတယောအသိပညာပါးနှင့်၌အိပ်ဘို့အချွေတာ - ပဲအိပ်ရ - ထိုကုစားလူ့အခွအေနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အယှက်မှ:
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေကို (အနာရောဂါ, နှိပ်စက်ညှင်းပန်း) ထိုစာရိတ္တနှစ်ဦးစလုံး
လူကျွမ်းကျင်ခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အစားအသောက်, အမိုးအကာနှင့်အဝတ်အစားရယူဖို့နာကျင်ပင်ပန်း၏ခက်ခဲလိုအပ်ချက် ...
အားလုံးအဓိကဘာသာတရားက၎င်း၏မွကွေီးအခွအေနေအခမဲ့ကိုချိုးဖျက်နိုင်မဖြစ်ခြင်းလူ့များ၏အားပေးမှုကိုစတင်ကြပြီ သူတို့စသည်တို့ကို "ရွေးနှုတ်ခြင်း", "လွတ်မြောက်ရေး", "ဓာတ်လှေကား" ဒီတိုးတက်မှုခေါ်ပြီ သူတို့က, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို၏အနိစ္စမှဘာသာရပ်ကဒီမှာမနိုင်သောကံမကောင်း, လွှမ်းမိုးခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာပြည်နယ်မှရှုံးနိမ့်ကိုရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
Monotheistic ဘာသာတရား (အရာဖွဲ့စည်းပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့မွကွေီးကမ္ဘာကြီးအရေး) သိပ်သိပ်သည်း၏လူနေမှုအခြေအနေများအတွက်လူ့အသက်ဝိညာဉ်၏ "လဲကျ" ၏အယူအဆအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ပေမယ့်ဗုဒ္ဓဒဿနိကဗေဒအတူတူပင်ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်မှန်ကျနော်တို့ကိုသတိပေးနေပါတယ် သည် "တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း၏ပတ်ပတ်လည်" (ဝင်စား) နှင့်အဆုံးများနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခအထဲကတောင်းဆို။
သို့သော်ဘာသာတရားလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မှဝဠာနဲ့လူ့ဖြစ်တည်မှုနှင့်ဤလွှတ်ပေးရန်ဝင်ရောက်ဖို့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်နည်းလမ်းများ၏ဤပြည့်စုံအသိပညာထင်ရှားဖူးဘူး။ ဤရွေ့ကားနည်းလမ်းများအနောက်နိုင်ငံတွေ Theurgy သို့မဟုတ်မြင့်မြတ်သောကို Magic (အရှေ့အတွက်ကြောင့်လက်ျာ၏ Tantra ဖြစ်ပါတယ်) တွင်ဟုခေါ်သည်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ တောင်မှပိုကောင်း, သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာယဇ်ပုရောဟိတ်ဇာတ်အချို့ဒြပ်စင်များ (ယဇ်ပုရောဟိတ်ပုဏ္ဏား, ယဇ်ပုရောဟိတ်, etc .. ) ဒီအသိပညာများလေတိုက်ရင်းအခါသူတို့သည်မိမိတို့သိုးစုများအဘယ်သူအားမျှတရားဝင်အမိန့်ကိုကျိန်ဆဲသောကြောင့်ဖုံးကွယ်ထားရန်အရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ် - သူတို့ပေးသောအပေါ် လွတ်မြောက်ရန်သင့်ပါတယ် - တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဏာနှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာကိုယ်ကျင့်တရားကိုကိုင်ထားချင်တယ်။
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး "ဖခင်များ" ကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြောင်းအဖြစ်ကောင်းစွာအိန္ဒိယအတွက်ပုဏ္ဏားဇာတ် (သူတို့ကိုရှို့အောင်အားဖြင့်၎င်း, ပိုကောင်းပြန်ပေးလော့, ဒါကြောင့်, ကြွယ်ဝသောမုတ်ဆိုးမတို့ကို) ကျမ်းပြောင်းလဲခဲ့သောအားထုတ်မှုသည်ဤလိုင်းများကိုဖေါ်ထုတ်ရန်လိုအပ်ပါသည် ဒီရှေးဟောင်းသွန်သင်ခြင်းမဖျက်ဆီးပါလျှင်အယှက်ရန်ခက်ခဲတိုက်သော်လည်းအဘယ်သူသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ။ ဤသည်ပျက်စီးခြင်း, ခေတ်သစ်သိပ္ပံ၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းမှဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်မယ်လို့ဆောင်ပုဒ် "ကိုယ်နှင့်ရမည်, ထိုစကြဝဠာနှင့်ဘုရားကိုသိကိုသိပါ" ဟုအစားထိုး "အထဲကရှာတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ, ယုံကြည်ပါ။ " ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာအချို့အယူဝါဒ (သို့မဟုတ်ဟိန္ဒူဘာသာ၏သန့်ရှင်းသောကျမ်း) ၏ဒါပေမယ့်လည်းစက္ကမင်မင်္နှင့်အခမျးအနား Theurgical အဆုံးစွန်သောမသာအရင်းအမြစ်သို့အလွန်စိတ်ပျက်စရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရှောင်ရှားခဲ့ကြသည်။
ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောအသိပညာ, ထို့နောက် "Esoteric ထုံးတမျးစဉျလာ" သို့မဟုတ် "ဟုအဆိုပါ Hermetic ထုံးတမျးစဉျလာ" နှင့် "အဆိုပါကမ္ဘာထုံးတမျးစဉျလာ" ဟုခေါ်ဘာများ၏ content ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့နဲ့တစ်လောကလုံးဖြစ်ရပ်မှန်များ၏ဤအသိပညာသူ့ကိုယ်သူသော့ခတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် သို့ဖြစ်. အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းမှကာကွယ်ခဲ့သည်ဘယ်မှာတိဘက်၏အထွဋ် မှစ. တံခါးကိုအဝိဇ္ဇာဖယျရှားနှင့်သတ္တဝါခွင့်ပြုရန်ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်အဆုံးမှာအနောက်နိုင်ငံများမှဖွင့်လှစ် သူတို့နားလညျမှုလှဲမှားတဲ့စကြဝဠာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့တည်ရှိကြ။
ထိုကဲ့သို့သောအသိပညာ disdainfully အနောက်နိုင်ငံများကနောက်ဆုံးရာစုလုပ်ပြုံးမတည်ရှိနိုင်ပါ, သိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများကသူတို့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းကိုလမျးညှနျမြားနှငျ့အဲဒီမှာဘာတွေ့ပါရန် "လျှို့ဝှက်ချက်အယူဝါဒ" ကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့်တစ်ခေတ်တည်း, လျော့နည်းပြုံးနေကြသည်အချို့ဘာသာစကားများတွင်စမ်းသပ်အဖြစ်မှန်ခဲ့ "ကိုပြောသည်" ။
သို့သော် "ဟုအဆိုပါလျှို့ဝှက်အယူဝါဒ" ကိုပြောပြသောဤအသိပညာကဘာလဲ?
"အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်ရာပေါင်းများစွာသည်ခရစ်တော်၏မတိုင်မီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီ၏, ပြီးတော့ဂရိနိုင်ငံအတွက်အီဂျစ်, ခါလဒဲနှင့်ထို့ထက် ပို. မကြာသေးမီကမှနှိုင်းယှဉ်ဖို့မှတဆင့်ကူးစက်သော စကြဝဠာအုပ်ချုပ်သည့် Universal ဥပဒေ (အ macrocosm) ၏ဗဟုသုတနှင့်လူကို (အ microcosm) နှင့်တကွအကောင်အထည်ဖော်မှု (ထိုချောမွေ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စတင်တည်ထောင်သူအရှင်ဆက်စပ်အလေ့အထများ asceticism ဖြစ်) ပညာတတ်တိုင်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုရောက်ရှိရန်နှင့်သူ၏ကျင့်ဝတ် Integrated ခိုင်မြဲစွာတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်နိုင်ကြောင်းဗိမာန်တော်၌ပေးထားခဲ့သည်။ "
« ဒါဟာအယူဝါဒလျှို့ဝှက်ခဲ့ သာအထက်တန်းလွှာထုထိုသို့မှအကြိုးစိုကျမပြိုးဘာသာရပ်, အများအားဖြင့်နိမ့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းမှာမဆိုညွှန်ကြားချက်ကာကွယ်ပေးသည်ကြောင့်, ဤအသိပညာမဆိုအဖျက်အသုံးပြုမှုအတွက်ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူမအဆုံးစွန်သောက Universal ဥပဒေများသာပုံဆောင်စကားရပ်ဖြစ်ခြင်း,a"ကိုဘာသာတရား" အဖြစ်လူတို့အဘို့ပြသခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်၌ဤသင်ကြားရေးလူအားလုံးမှထူးခြားသောနှင့်ဘုံဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကရုပ်လုံးပေါ်လာဖို့ချေးယူ, အဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတိုင်းရင်းသားများ၏တိကျသောသဘောသဘာဝဖို့သင့်တော်ပါတယ်အမှတ်လက္ခဏာတွေ။ ထို့ကြောင့်, မျိုးစုံပွဲအတွက်အမှန်တရားကိုယ်တိုင်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ "
"Theosophy" ဒါဟာ၏အဟောင်းအမည်အောက်တွင် redefines သောဤအမှန်တရားခဲ့ "နှင့်ဤအခြေအနေတွင်ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ဘာသာတရား, ဒဏ္ဍာရီအပေါင်းတို့နှင့်တကွအတိတ်ဒဿနပညာရှင်ကျောင်းများနှင့်ဖန်ဆင်းသောအရှိဆုံးတောက်ပပေါင်းစပ်ကိုင်ထားပါ။ စစ်မှန်တဲ့အသိပညာတက္ကသိုလ်သရုပ်ပြခဲ့သညျ။ "
"ရှေးပညာသည်များ၏ဆရာများကဲ့သို့ပင်သူမအစဉ်အဆက်ကိုထပ်အတွေးအခေါ်နှင့် asceticism restore ရန်သူ၏သိပ္ပံအားဖြင့်ရာစုနှင့်အထွေထွေဝိညာဉျ၏စကားရပ်ထဲမှာဇာတ်စင်ရောက်ရှိနှုနျးထံသို့ပြန်သွား နက်နဲသောအရာမှဦးဆောင်။ "
ဒါကသွန်သင်ထုတ်လွှင့်အကျိုးဆက်အဆုံးစွန်သောများစွာသောဒေသများရှိ "ခေတ်သစ်သိပ္ပံ," ယနေ့ကဘာလဲဆိုတာမသာအမြစ်, ဒါပေမယ့်လည်းသတ္တဝါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခြေခံနိယာမ၏ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ, စကြဝဠာထဲမှာဝိညာဏ်၏ဖြစ်ရပ်ဆန်း။ "
အရှေ့မှာတော့ကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပထမဦးဆုံးအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း-ဤအရပ်ထဲမှာလျှို့ဝှက်ဝေဒကျောင်းများအတွက်မှာမူလကdivulguée-ကြီးနှင့်ရှေ့ဆက်တင်ထားရန်အရာ, အီဂျစ်, ဂရိနှင့်အာရှမိုင်းနား ဒုတိယရာစုအေဒီ၏အဆုံးကနေ, အနောကျပိုငျးသမိုင်း၏စည်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့အကြောင်းကြောင်းအဖိုးတန်စာမူ။ "
« သူမသည်သတ္တမရာစု, တိဗက်ကနေ, အာရုံစူးစိုက်။ ဤသည်, ထိုအချိန်တွင်အရှင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောစာမူနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကအတွက်နောက်ပိုင်းမှာဒဏ်ခတ်ဖို့ဖျက်ဆီးခြင်းထဲကသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, များစွာသောခြေရာတွေကိုအိန္ဒိယဆောင်ခဲ့သောပထမဦးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရင်ကသီချင်း Tsen ဂမ်-po ခဲ့သည် စာဖြင့်ရေးသားသွန်သင်။ Naropa, ဒွါဒသမရာစုအတွင်း bequeathed အိန္ဒိယဆရာ, Marpa အခြားစာမူကျောတိဘက်သူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏သူဘာသာပြန်ဆိုသူ။ ဘယ်အချိန်မှာဆယ်ငါးရာစုထဲမှာ, ဂရန်းချောင်းKaparé forma တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဒေသနာ - အားလုံး၎င်း၏ရရှိပြီး: cosmogenesis, anthropogenesis, ဆေးပညာ, နက္ခတ္တဗေဒ, ဗေဒင်, Theurgy, etc - ပြီးသားအပြည့်အဝကမ္ဘာကြီးကိုအပေါ်ပြိုလဲသောမှောင်မိုက်ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့သည်။ တိဘက်၎င်း၏တပိုင်တနိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၏တိတ်ဆိတ်စွာ, လူ့မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းသိမ်းနှင့်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ »
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့: သမိုင်း၏သင်တန်း, Global Knowledge ရှေးကျဲဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်၎င်း၏အများဆုံးထိရောက်အခြေခံဖြစ်သောကြောင့် ပို. ပို. occulta, Theurgy, အနည်းငယ်သာကျင့်ဝတ်နှင့်အတူယောက်ျား၏လက်၌ပျက်စီးခြင်း၏တစ်ဦးတူရိယာခဲ့သည် ဒီအထူးသဖြင့်အသိပညာအတွက်တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်လက်လှမ်းအတူအန္တရာယ်ကင်း - ဤယဇ်ပုရောဟိတ်ဇာတ်ကိုယ်နှိုက်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ "
အဲဒီအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကိုတဆင့် "ဟု The Secret ကိုအယူဝါဒ" ၏ရေးသားသူအားမိမိသှနျသငျပေးတျောမူသောဤ "ကျောင်းအရဟံ၏သဘောကို Transhimalayan" ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ကျနော်တို့ကဒီမှာဘာသာတရားအားလုံးကိုနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အတတ်အစဉ်အလာအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထာဝရအမှန်တရားအပေါ် esoteric ဗျာဒိတ်တောက်ပဆုံးနဲ့စစ်မှန်ပြီဒါကြောင့်ပါပဲ။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အတတ်၏အရှိဆုံးဧရာမလုပ်ငန်း၏ဦးခေါင်းကို.
အဆိုပါ Esoteric အယူဝါဒအားဖြင့်သက်သေပြငါးခုအချက်အလက်များ:
1 - လျှို့ဝှက်ချက်အယူဝါဒအဘယ်သူမျှမဘုရားမဲ့ဝါဒသွန်သင်အဆိုပါ Sanskrit စကားလုံးကိုမဆိုနတ်ဘုရားဘုရားအပါအဝင်ရုပ်တုဆင်းတုတို့ "," ၏ nastika '' ငြင်းပယ်ခံရ "ကဆိုလိုသည့်သဘောမှတစ်ပါး။ ဒီသဘောနဲ့တိုင်း Occultist တစ် nastika ဖြစ်ပါတယ်။
2 - ဒါဟာဠာတစ်ဂေါ့သို့မဟုတ် "ဖန်ဆင်းရှင်" ဝန်ခံသည် ; ဗိသုကာကျောက်ကိုထိမိပေမယ့်ကိုသာအစီအစဉ်ကိုပေးထားပြီးမှဘယ်တော့မှထားပြီးဖြစ်သော်လည်းအဆောက်အဦး၏ "ဖန်ဆင်းရှင်" ၏တစ်ဦးဗိသုကာပညာရှင်အဖြစ်အလုပ်သဘောတစ်ခု "တစ်ဝက် URGOS" (Demiurge) သူ Mason ဖို့အားလုံးကိုလက်စွဲစာအုပ်အလုပ်သမားကျန်ရစ်တော်မူပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုအတွက်အစီအစဉ်ကိုဝဠာ၏ Ideation ဖွငျ့ပေးတျောမူ၏, နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဥာဏ်အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ Legion နှင့်တပ်ဖွဲ့များမှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ဒီ "တစ်ဝက် URGOS" ဟုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်တစ်ခုမစုံလငျအပို-နတ်မင်းကြီးဘုရားသခငျသညျဆိုသညျကားဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောအပေါငျးတို့သ Dhyan Chohans နှင့်အခြားတပ်ဖွဲ့များ။
3 - အ Dhyan Chohans တစ်ဦးကို dual သဘောသဘာဝများ သူတို့ရေးစပ်နေကြသည်ကတည်းက:
(ခ) ညွှန်ကြားနှင့်စွမ်းအင်နှင့်သောက Universal စိတ်များ၏ Ideation ထင်ဟပ်သည့် Dhyan Chohanic အတွေးအခေါ်ကြောင်းလမ်းညွှန်သောအသိဉာဏ်ဝိညာဉျသသို့မဟုတ်နတ်မင်းကြီးသတိ။
ဤ manvantaric ကာလအတွင်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသရုပ်နှင့်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကိုယ်ကျင့်တရားသက်ရောက်မှု၏အစဉ်စီးရီးအတွက်ရလဒ်များအားလုံး Karma မှဘာသာရပ်ဖြစ်ခြင်း။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအစဉ်အမြဲစုံလင်သောမဟုတ်ပါကကုလားကာနောက်ကွယ်ကိုဝှကျထားတဲ့အာဏာရထောက်လှမ်းရေး၏တည်ရှိမှုကိုဖျောပွနိုငျသောမြောက်မြားစွာလျှင်သက်သေအထောက်အထားကြောင်းကတည်းကကြောင့်သို့ရာတွင်ကွာဟချက်များနှင့်အပြစ်အနာအဆာကိုပြသ ပင်သိသာပျက်ကွက်ရန်အလွန်မကြာခဏဦးဆောင် - ကမစုပေါင်း Legion (Demiurgos) ထိုအောက်ပါအတိုင်းရ, မတက်ကြွမဆို, တစ်ဦးချင်းစီကိုယူ, ဘုရားသခငျ့ဂုဏ်ထူးသို့မဟုတ်ကိုးကှယျခွငျးအဘို့အလုံလောက်သောမရှိကြပေ။
အားလုံးသို့သော်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကိုလေးစားအသိအမှတ်ပြုခွင့်ရှိသည်, ထိုလူကိုအစဉ်အမြဲ, သူ့စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ဖြစ်လာသဖြင့်, ထိုသိသိတာဝန်အတွက်သဘောသဘာဝတစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အကြံပြုချက်များ၏ဘုရားသခင့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုကူညီရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါမွငျနှင့် unknowable Karana, ရှိသမျှအကြောင်းတရားများ၏ uncaused အကြောင်းမရှိ, သာသန့်ရှင်းသောမြေပေါ်တွင်၎င်း၏နတ်ကွန်းများနှင့်ယဇ်ပလ္လင်ကိုရှိသင့်သည်အစဉ်အမြဲကြှနျုပျတို့သညျနှလုံး inviolate - က "အသံသည်အားဖြင့် မှလွဲ. ဖော်ပြခဲ့တဲ့မဟုတ်, intangible, မမြင်ရတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာဝိညာဏ်၏ "နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်။ ထိုသူကိုပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်သောသူတို့က, သူတို့ကိုနှင့် Universal ဝိညာဉ်တော်သည်အကြားတစ်ခုတည်းသောကြားခံသူတို့ရဲ့ဝိညာဉျကိုအောင်တိတ်ဆိတ်နှင့်သူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်၏သန့်ရှင်းစေသောအထီးထီးနေခြင်းအတွက်ဒါသူတို့ရဲ့ကောင်းသောလုပ်ရပ်များကသာယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်သူတို့၏အပွစျရှိရည်ရွယ်ချက်များကိုသာလုပျသငျ့ ရောက်ရှိခြင်းကမ်းလှမ်းခံရသူမြင်နိုင်နှင့်ရည်ရွယ်ချက် expiation ။
သငျသညျဆုတောငျးပေးသည့်အခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့ဖြစ်ကြကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကအခန်းသို့ သွား. , တံခါးကိုပိတ်ပြီးနောက်လျှို့ဝှက်ချက်အတွက်မူသောသင်တို့အဘတည်းဟူသောဆုတောင်းကြလော့။
က Mathieu, VI ကို, 5-5
ငါတို့အဘတည်းဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏သတ္တမနိယာမစိတ်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်၏ "အတွင်းအခန်းထဲသို့" တွင်ဖြစ်ပါသည်, "လျှို့ဝှက်ချက်ထဲမှာ" ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်နှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမပြင်, ယရှေုက, ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ခရစ်ယာန်တွေကသူတို့နည်းစနစ်ပြန်လုပ်မှကိုချစ်သည်ပညာ၏စကား၌ထင်ရှားသောအဓိပ်ပာယျနှငျ့ ပတျသကျ. ဒီတော့မျက်စိကန်းရှိပါသလဲ
4 - အရေးပါသောထာဝရဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်က၎င်း၏ ideations ပေါ်မှာမြဲမြံစေဖို့အတွက် Universal စိတ်, ထူးခြားသောနှင့် Infinite အသုံးပြုရသော Upadhi သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် esotericists သဘောသဘာဝ၌အဘယ်သူမျှမအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် "သေပြီ" နှစ်ခုကမင်းထက်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဖြစ်သကဲ့သို့အခြေအမြစ်ဖြစ်ခြင်းအကြားသိပ္ပံအတွက်ဂုဏ်ထူးထိန်းသိမ်းရန်။ သိပ္ပံအတွက်စဉ်းစားနိုင်ပေမဲ့ - ကျနော်တို့အားလုံးအတှေ့အကွုံအားဖြင့်သိသည်အတိုင်းအတိအကျသိပ္ပံတစ်အပွောငျးအလဲ Dame ဖြစ်ပါသည် - မှော်အတတ်သိတယ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသွန်သင်, ကတက်, Manu နှင့် Hermes ကတည်းကရှေးပဝေအခြိနျ မှစ. ပြုတော်မူပြီအဖြစ် Paracelsus နှင့်သူ၏ဆက်ခံ။
Hermes Trismegistus သည်သုံးကြိမ်မဟာ says:
ငါ့သား, ကိစ္စဖြစ်လာ; ကိစ္စဖြစ်လာ၏မော်တော်ယာဉ်သည်ကယခင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်လာထောက်ပံ့ပေးသူ uncreated သညျဘုရားသခငျ၏လှုပ်ရှားမှု၏ mode ကိုဖြစ်ပါတယ်။ [ရည်မှန်းချက်] ကိစ္စ, ဖြစ်လာ၏ပိုးနှင့်ပြည့်စုံခဲ့ပွီးထိုဖန်တီးမှုအင်အားစုအဖြစ်စံပြပုံစံများ၏မှိုထုတ်ဆောင်နေသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းမရှိသေးပါပုံစံခဲ့ပေါက်ဖွားပေးသောမဟုတ်; ဒါကြောင့်အရေးယူမှုထဲသို့သွင်းထားသည့်အခါကဖြစ်လာသည်။
ဒီရန်, နှောင်းပိုင်းကဒေါက်တာအန်နာ Kingsford, အ Hermetic အပိုင်းအစများကို၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဘာသာပြန်ဆိုသူနှင့် compiler, စာမျက်နှာပေါ်တွင်သမ်မာအတွက်မှတ်ချက်တွေ "ဟုဒေါက်တာ Menard ဂရိ၌တူညီသောစကားလုံးမွေးဖွားနှင့်ဖြစ်လာခြင်းကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းမှတ်ချက်ချ။ ဒီမှာစိတ်ကူးယင်း၏သောထာဝရအနှစ်သာရနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းမပြုမီသို့မဟုတ် 'ဖြစ်လာ' က passive နှင့်မလှုပ်အခြေအနေကြောင်းကမ္ဘာကြီးကိုတက်စေသည်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကအရေးယူထဲသို့သွင်းထားမခံရမီ '' ခဲ့ '' အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ; ယခု '' ဖြစ်လာ 'ကြောင့်မိုဘိုင်းနှင့်တိုးတက်သောဖြစ်ပါသည်ဟုပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမိနျးမထင် [သို့မဟုတ်, Vedantins အဆိုအရ] Hermetic အဆိုအရသူသည်ဖန်ဆင်းခြင်းညျဘုရားသခငျ၏ [Manvantara] ထို့ကြောင့်လှုပ်ရှားမှု၏ကာလသည် "သော Hermetic ဒဿနိကဗေဒ၏သက်သက်သာဝေဒအယူဝါဒ, ဖြည့်စွက် နှစ်ခု modes သာရှိပါတယ် - လုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ်သက်တော်ဘုရားသခငျသညျ (Deus explicitus) ပြောင်းလဲနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏လိုက်လျောညီထွေနေ [Pralaya] ဘုရားသခငျသညျ (နှစ်ခု implicitus) involuted ။ ယောက်ျားသည်ဖြစ်ကြ၏အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးသည် Modes, နိုးနိုးကွားကွားခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်း၏ပြည်နယ်များစုံလင်ပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။ Fichte, ဂျာမန်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်, ငါတို့အကွိမျမြားစှာအဖြစ်သာယင်း၏တည်ရှိမှုကို (Dasein) ကသိကြတအဖြစ် (စိန်) ဖြစ်ခြင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအမြင်ကိုလုံးဝ hermetic ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ '' စံပြပုံစံ ''? ပညတ်စိတ်ကူးများသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ် Neoplatonists, 'ဖန်ဆင်းခြင်း' သို့မဟုတ်ဖြစ်လာရှေ့တော်၌ထိုဘုရားသခငျ့ကြံစည်တည်ရှိကြောင်းအရာထာဝရနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္သဘောတရားများဖြစ်ကြသည်။ "
သို့မဟုတျ, Paracelsus ၏ဒဿနထဲမှာရှိသကဲ့သို့:
အရာအားလုံးတစ်ခု universal ဖန်တီးမှုအားထုတ်မှုများ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သနည်း သဘာဝတရားထဲမှာသေလွန်သောသူတို့သည်အချည်းနှီးသက်သက်ရှိပါတယ်။ အရာအားလုံးအော်ဂဲနစ်နှင့်လူနေမှုဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်လောကဓာတ်လုံးကိုတစ်ဦးလူနေမှုသက်ရှိဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
ဖရန့် Hartmann, Paracelsus
5 - အစကွဝဠာအတွင်းမှာထိန်းသိမ်းထား၎င်း၏စံပြအဆင့်ကနေရေးဆွဲခဲ့သည် ထာဝရကလာ သတိမေ့သော Parabrahman မခေါ် Vedantins အဘယ်အရာဖြစ်သည်။ ယခုဤ Von Hartmann အားဖြင့်လွှဲပြောင်းယူ, ပလေတို၏ "သူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်, ပင်နိစ္စထာဝရနှင့်တည်ဆဲစိတ်ကူးများ" အမြင့်ဆုံးအနောက်တိုင်းဒဿန၏ကောက်ချက်မှလုံးဝနီးပါးတူညီသည်။
Herbert Spencer ၏ "မသိသော" သည် Transcendental Reality နှင့်အနည်းငယ်ဆင်တူသည်။ အဆိုပါသတိလစ်၏ဒosophနိကဗေဒ၏စာရေးသူတစ် ဦး သေတတ်သောလူတတ်နိုင်အဖြစ်ကြီးမြတ်နက်နဲသောအရာ၏ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် (ဤအမှု၌သာ) ရောက်ရှိစဉ်တွင်အားလုံးဆက်လက်။ ရှေးခေတ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေဒါမှမဟုတ်အလယ်ခေတ်ဒphilosophနိကဗေဒပညာရှင်တွေကဒီအကြောင်းအရာကိုချဉ်းကပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဖော်ပြဖို့တောင်မှအနည်းငယ်သာရဲရင့်ကြပါတယ်။ Paracelsus သည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းနှင့်သူ၏အတွေးအခေါ်များကို Paracelsus တွင်ဒေါက်တာအက်ဖ်ဟတ်မန်းမှချီးကျူးဂုဏ်ပြုဖော်ပြသည်။
အားလုံး Kabbalists ခရစ်ယာန်တွေအရှေ့၏စိတ်ကူးအမြစ်နားလည်ပါတယ်။ Active ကိုပါဝါ, ကို "မဟာအသက်ရှုထာဝရရွေ့လျားမှု," နှစ်ခုဆန့်ကျင်တပ်ဖွဲ့များအားဖွငျ့ရွေ့လျားမှုအတွက် setting သည်အသစ်သောကာလ၏အရုဏ်မှာ Kosmos မနိုးဘဲ - ထို centripetal နှင့် centrifugal အင်အားသုံးအထီးဖြစ်ကြပြီး နှင့် Illusion ၏လေယာဉ်ပေါ်ရည်မှန်းချက်အဖြစ်လုပ် - အတူတကွတစ်ခုတည်း Primal တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်ထားတဲ့အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘော, ရုပ်ပိုင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအမျိုးသမီး, ။ တနည်းအားဖြင့်ဒီနှစ်ဆလှုပျရှားမှုထာဝရစံပြ Kosmos ဟာအံ့သြလေယာဉ်အတွက်ကိုကျော်အဖြစ်အပျက်၏တဦးတည်းအတွက်အစီအစဉ်, ဒါမှမဟုတ် noumenal လေယာဉ်သယ်ဆောင်။
, ကြောင်းကိုအားလုံး, ထာဝရ IS, ကနျ့ဖြစ်ကြပြီးမှသာမိမိတို့၏ရည်မှန်းချက် form မှာမဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့စံပြပုံစံအတွက် perishable ရာပင်မရေမတွက်နိုင်သောပုံစံများ, ကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကထာဝရအတွက်အကြံပြုချက်များအဖြစ်တည်ရှိ, သူတို့သွားကွယ်ပျောက်တတ်သောအခါထင်ဟပ်အဖြစ်တည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
မှော်အတတ်သည်သူ၏စံပြအမျိုးအစားပြီးသား Subject တည်ရှိခြင်းမရှိဘဲ, အဘယ်သူမျှမပုံစံကိုသဘာဝအားဖြင့်သို့မဟုတ်လူကိုအသုံးပြုပုံဘာမှမှပေးထားနိုင်ပါတယ်သှ; ထက်ပိုပုံစံသို့မဟုတ်အသွင်အပြင်အဘယ်သူမျှမ၏သိစိတ်တံခါးအထဲသို့ဝင်စသောသူ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမပေးနိုငျသညျ, ပြီးသားကိုအနည်းဆုံးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်, ရှေ့ပြေးပုံစံ form မှာမတည်ရှိ။
လူပုံစံ, ဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်, အပင်တစ်ပင်သို့မဟုတ်တစ်ကြောကျခဲ၏ထိုမျှမပြု, "ဖန်တီး" ဘယ်တော့မှတို့ကသူတို့ "ကိုစတင်မှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာဉ်ပေါ်ခဲ့သည် ဖြစ်လာသည် ", ထိုသူတို့၏ပစ္စုပ္ပန်ပစ္စည်းများအတွက် objectify အားဆင့်ဆိုရမည်မှာရန်ဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်အရှိဆုံးသူတော်ကောင်းတရားအနှစ်သာရနှင့်ပိုပြီးစူပါအာရုံခံထံမှ၎င်း၏ grossest အသွင်အပြင်ရန်, အပြင်ဘက်မှအတွင်းပိုင်းထံမှထွက်ဖြန့် ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့ပုံစံများ astral သို့မဟုတ်éthrésရှေ့ပြေးပုံစံအဖြစ်ထာဝရအတွက်တည်ရှိကြ, ထိုသို့သူ၏တာဝန်ကရည်ရွယ်ချက်တည်ရှိမှုနှင့်အသက်သူတို့ကိုရဖို့ခဲ့ဝိညာဉ်သည်ဤမော်ဒယ်များသတ္တဝါဒါမှမဟုတ်ဘုရား, နှင့်ညီသည် မြေကြီး, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အနှစ်သာရကနေအနာဂတ်အတ္တများ၏ protoplasmic ပုံစံများကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်အဖြစ်မကြာမီဒီလူ့ Upadhi အဖြစ်သို့မဟုတ်အခြေစိုက်စခန်းတွေအတွက်မှိုအဆင်သင့်ပဲသဘာဝမြေပြင်တပ်ဖွဲ့များသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒြပ်စင်မှတပါး, ပါရှိသောသောဤစူပါအာရုံခံမှိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်အားလုံးအတိတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပုံစံများ၏အပေါင်းတို့နှင့်ပုံစံများ ဒီကမ္ဘာလုံး၏တိရိစ္ဆာန်အနာဂတ်။ လူ့ပုံစံချပြီးမတိုင်မီအားလုံးအပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်အသေကောင်အားဖြင့်အောင်မြင်ပြီးမူကားယောက်ျား၏အပြင်ဘက်၌ shell ကိုနိုင်အောင်။
SOURCE မှ: https://explicithistoire.wordpress.com/2014/12/21/les-dessous-de-lhistoire-et-la-doctrine-secrete/
8 €ကနေ 28,99 အသစ်
4 28,99 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 29,00 ကိုဝယ်ပါ
ဇူလိုင်လ 9, 2020 6:26 pm တွင်၏အဖြစ်
ဇာတိမြောက်အမေရိကန်အိန္ဒိယ (Hopi) ၏ပရောဖက်ပြုချက်များ